1001 kinh nghiệm chạy Grab “đắt hàng” cho người mới bắt đầu | Anybook.vn - Anybook
1001 kinh nghiệm chạy Grab “đắt hàng” cho người mới bắt đầu | Anybook.vn
Te hitantana Grab nefa tsy fantatra hoe aiza no hanombohana? Inona avy ireo traikefa “lafo” amin’ny fampandehanana Grab ho an’ny vao manomboka? Araho ny lahatsoratra zarainay eto ambany!
Olona mikasa hitondra fiara ve ianao ka mila mizara ny traikefanao amin’ny fitantanana ny Grab? Raha te hianatra bebe kokoa momba ireo fampahalalana etsy ambony ianao dia araho ny lahatsoratra etsy ambany!
1 I. Fampandrosoana matanjaka ny serivisy Grab amin’ny hetsika teknolojia nomerika
2 II. Traikefa mitantana ny Grab ho an’ny vao manomboka
2.1 1. Aza manaiky ny saran-dalan’ny fiara mandritra ny ora be
2.2 2. Fampiasam-bola amin’ny finday avo lenta tambajotra
2.3 3. Fandaharana ara-potoana
2.4 4. Atolotra ho an’ny dia fohy
2.5 5. Misoratra anarana amin’ny serivisy fanaterana bebe kokoa
2.6 6. Mamorona fiaraha-miory amin’ny mpanjifa amin’ny segondra voalohany
2.7 7. Amboary ny fitaovana ilaina
2.8 8. Midira ao amin’ny vondrom-piarahamonina teknolojia taxi-moto
3 III. Ahoana ny fisoratana anarana Grab ho mpamily teknolojia?
3.1 1. Dingana 1: Manomana antontan-taratasy
3.2 2. Dingana 2: Jereo ny kalitaon’ny fiara
3.3 3. Dingana 3: Mandehana any amin’ny biraon’ny Grab raha hisoratra anarana
3.4 4. Dingana 4: Misoratra anarana amin’ny Momo ary mividy fanamiana Grab
4 IV. Traikefa mitantana ny Grab Food miaraka amin’ny fidiram-bola ambony izay tsy fantatrao
4.1 1. Mazoto mihazakazaka mankany afovoany
4.2 2. Mihazakazaka ao anaty orana
4.3 3. Tazony ambony sy ambany 10k ihany ny poketra
4.4 4. flexibility renivohitra
4.5 5. Aza manaiky sidina 10 minitra alohan’ny ora maika
I. Fampandrosoana matanjaka ny serivisy Grab amin’ny hetsika teknolojia nomerika
Ny fivoarana matanjaka amin’ny indostrian’ny teknolojia nomerika dia nisy fiantraikany mafy tamin’ny lafiny rehetra amin’ny fiainana, indrindra eo amin’ny sehatry ny serivisy fitaterana, eo amin’ny indostrian’ny fitaterana. Ny serivisy taxi, ny fampandehanana taxi Grab dia “tafintohina” alohan’ny fivoaran’ny orinasa teknolojia lehibe, matetika Grab, Go Viet na Fastgo.
II. Traikefa mitantana ny Grab ho an’ny vao manomboka
1. Aza manaiky ny saran-dalan’ny fiara mandritra ny ora be
Raha ny filazan’ireo efa nitantana ny Grab amin’ny maha matihanina azy dia tsy mety ny mandeha amin’ny Grab mandritra ny ora maika. Satria, any amin’ny faritra misy ny tsy fahampian’ny mpamily Grab na mandritra ny fitohanan’ny fifamoivoizana mampatahotra tahaka ny any Ho Chi Minh City ihany, Grab no afaka manohy manampy valisoa ho an’ireo mpiara-miombon’antoka aminy.
Experience amin’ny fitantanana ny Grab
Haharitra ela kokoa noho ny mahazatra ny mitondra mpandeha mandritra ny ora faratampony, fa mitovy ihany ny vola haverinao amin’ny fotoanan’ny Grab hafa. Noho izany, ny tsara indrindra amin’izany fotoana izany dia tokony hifidy ny lalana hampandehanana ny Grab ivelan’ny tanàna ny mpamily Grab ary hialana amin’ny lalana tsy dia misy fitohanan’ny fifamoivoizana.
2. Fampiasam-bola amin’ny finday avo lenta tambajotra
Tena ilaina ny smartphone sy carte SIM miaraka amin’ny tambajotra haingam-pandeha satria eo amin’ny fampandehanana ny Grab hisambotra sy hitondrana mpandeha dia tsy maintsy mampiasa izany foana ianao. Noho izany, ny fampiasam-bola amin’ny mpamily Grab miaraka amin’ny telefaona manana tambajotra haingam-pandeha dia tena ilaina, sa tsy izany?
3. Fandaharana ara-potoana
Ny fahafantarana ny fomba fitantanana araka ny tokony ho izy ny fotoana fiasan’ny Grab dia mety hahomby kokoa ny asan’ny mpamily Grab.
Maraina: Tsy maintsy mifoha amin’ny 04:30 ny mpamily Grab mba hanararaotra ny fanadiovana sy ny sakafo ary ny hazakazaka amin’ny 5:00 maraina. Amin’io fotoana io matetika no betsaka ny fiaran-dalamby Grab handeha lavitra ary banga ny lalana, ka ho mora ny fandehanana. Amin’ny 07h00 eo ho eo dia afaka miverina manomboka ny asa lehibe.
READ Cách đăng ký bán hàng trên Lazada đầy đủ và chi tiết nhất | Anybook.vn
Tolakandro: Raha tsy miasa mihoatra ny ora ny mpamily Grab dia aza manandrana mampandeha Grab amin’ny ora maika. Modia ary manararaotra ny sakafo hariva, miala sasatra, amin’ny 19:30 manomboka manokatra ny fampiharana ary mandehana mandray vahiny. Miankina amin’ny toe-pahasalamana, ny asa izay azonao atao hatramin’ny alina. Mizara traikefa iray hafa amin’ny fampandehanana ny mpamily Grab ho an’ny Grab dia ilaina ny mahafantatra hoe aiza no faritra misy mpanjifa maro ary amin’ny fotoana inona no mitombo ny fangatahana amin’ny Grab ho an’ny mpanjifa mba hahatontosa tsara ny asa.
4. Atolotra ho an’ny dia fohy
Amin’izao fotoana izao, ho an’ny 2km voalohany amin’ny Grab dia 12.000 VND ny saran-dalana ary 3.400km ny saran-dalana manaraka. Noho izany, raha mandeha Grab fohy be ianao ao anatin’ny iray andro dia ho afaka hahazo vola bebe kokoa amin’ny dia lavitra vitsivitsy.
Ankoatra izay, tsy mipetraka ny mpamily Grab miandry ny mpanjifa hanafatra fiara Grab. Satria amin’izao fotoana izao, ny rafitra dia ho default fa miala sasatra ianao ary ambany dia ambany ny fahafahana mampandre ny vahiny. Rehefa vita ny dia lavitra kokoa ianao dia havaozy ho azy amin’ny fiara vaovao maro ny rafitra ny ampitso.
Jereo koa: Fampahalalana ankapobeny momba ny laharan-telefaona Grab switchboard sy serivisy hafa
5. Misoratra anarana amin’ny serivisy fanaterana bebe kokoa
Ankoatra ny fitaterana mpanjifa isan’andro, ny traikefa amin’ny fampandehanana ny Grab ho an’ireo izay vao nisoratra anarana hitantana ny Grab dia ny fahafahan’izy ireo misafidy ny hisoratra anarana amin’ny tolotra fanaterana sakafo sy serivisy fanaterana haingana.
Ity karazana Grabfood ity dia afaka manampy olona maro hahazo fidiram-bola fanampiny mandritra ny fotoana tsy misy mpanjifa. Ankoatr’izay, ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana Grab miaraka amin’ny vidiny amin’ny fanaterana Grabfood dia matetika ho ambony noho ny vidin’ny mpandeha, ka azonao antoka ny momba ny vidin’ny entona.
6. Mamorona fiaraha-miory amin’ny mpanjifa amin’ny segondra voalohany
Ny fomba dia tokony ho madio: Tokony hiakanjo milamina sy milamina ianao mba hamoronana fiaraha-miory amin’ny mpanjifa.
Mandritra ny dia, manorina fifandraisana amin’ireo mpanjifa misoratra anarana amin’ny fitantanana Grab miaraka amin’ny fahaiza-miresaka toy ny:
+ Anontanio hatrany ny mpanjifa hoe: “Vonona ho avy haka anao ve ianao, ny adiresinao ve?”… Izany dia hamonjy anao fotoana be hiandrasana sy hijerena Hamarino ny mombamomba ny adiresy marina.
+ Mitandrema amin’ny zavatra madinidinika amin’ny mpanjifa: Raha tokony hamela ny mpanjifa hanodina ny tongotra irery ianao, dia ianao no tokony hanampy azy ireo hanao izany. Na koa hoe manao findramam-bola ho an’ny vahiny izany na manamboatra satroka mba ho azonao omena ny vahiny rehefa tonga izy ireo.
Fantatr’ireo efa nitantana ny Grab hatry ny ela fa tsara kokoa noho ny an’ny hafa ny fidiram-bolan’ny mpamily, nefa mbola ao anatin’ny volan’ny tady. Izany dia hiankina amin’ny fahaizanao mifandray sy ny fihetsikao amin’ny serivisy mpanjifa. Raha manao asa tsara ianao dia afaka miantso anao indray ny mpanjifa mahazatra amin’ny famandrihana manaraka, tsy izany ve no tadiavin’ny mpamily rehetra.
7. Amboary ny fitaovana ilaina
· Voalohany: Smartphone miaraka amin’ny karatra SIM miaraka amin’ny fifandraisana tambajotra haingana
Faharoa: Power bank sy telefaona finday, headset
Fahatelo: Rano fisotro sy akanjo orana 2 farafahakeliny (ho an’ny tenanao sy ho an’ny vahiny), fitaovana fanamboarana fiara tsotra…
READ Millennial là gì? Những thông tin cần biết về người Millennial | Anybook.vn
Ity fiomanana hisoratra anarana amin’ny Grab ity dia tsy ho tafahoatra mihitsy satria mandritra ny dia, raha lany ny batterie na ny tambazotran’ny findainao, na tsy maintsy mijanona ianao raha mihaino ny telefaonina tsy tapaka, dia mety hahavery anao ny dianao. fahatapahana. Ity angamba no traikefa mahafa-po indrindra amin’ny fampandehanana Grab ho an’ireo vao haingana izay tsy azonao odian-tsy hita.
8. Midira ao amin’ny vondrom-piarahamonina teknolojia taxi-moto
Ao amin’ny tranokalan’ny tambajotra sosialy amin’izao fotoana izao dia misy vondrom-piarahamonina sy vondrona maro ho an’ny mpamily teknolojia Grab, Go-Viet na Now, My Go… Eto ianao dia afaka mizara fahatokisana vaovao ary mianatra avy amin’ny zavatra niainan’ireo izay efa lasa teo aloha mba ahafahantsika mahita. manatsara ny fahaizantsika miasa ary mifanohana rehefa tojo fahasahiranana.
Tato ho ato dia nisesisesy ny lozam-pifamoivoizana na fanendahana nataon’ny mpamily. Mitandrema mandrakariva amin’ny dia lavitra ary tsy tokony handray vahiny amin’ny ora tara loatra ary koa mitondra mpandeha hivoaka ny faritra voatondro ao amin’ny fangatahana mba hiantohana ny fiarovana anao!
Jereo koa: Ny fifanomezan-tanana mampanantena eo amin’ny Grab Vietnam sy Lazada Vietnam
III. Ahoana ny fisoratana anarana Grab ho mpamily teknolojia?
1. Dingana 1: Manomana antontan-taratasy
Ahoana ny fisoratana anarana amin’ny Grab:
Voalohany: kara-panondro na pasipaoro sy kara-panondron’ny misoratra anarana Rehefa tonga any amin’ny orinasa dia mila manomana ny taratasy sy ny antontan-taratasy rehetra araka ny voalaza, izay ahitana ireto taratasy ireto:
Faharoa: Ny fisoratana anarana amin’ny fiaranao sy ny taratasin’ny fiara (class A1 na A2 raha kodiaran-2 ary B2 raha kodiaran-4)
Fahatelo: Ny fiantohana loza dia tsy maintsy atao ho an’ny fiara manana 1 volana mahery
Fahefatra: Raha mbola mpianatra ianao dia tsy maintsy mitondra ny karatry ny mpianatra, raha tsy izany dia tsy maintsy manomana firaketana heloka bevava na taratasy fanamarinana tsy misy firaketana heloka.
Mariho ny fomba fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab: Ireo antontan-taratasy rehetra etsy ambony dia tsy maintsy tany am-boalohany, fa tsy fotokopia
2. Dingana 2: Jereo ny kalitaon’ny fiara
Ahoana ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab? Aorian’ny fandraisany ny fangatahana, ny mpanome tolotra dia hanamarina ny kalitaon’ny fiara voasoratra anarana mba hiantohana ny fiarovana amin’ny dingana izay alainao sy andefasanao vahiny. Ahoana ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab? Ny fiantohana ny fiarovana ny mpanjifa no laharam-pahamehana amin’ny Grab, ka ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab rehefa misoratra anarana ny moto na ny fiaranao dia mila mahafeno ny fepetra takian’ny kalitao izay azo ambara toy izao: : mandeha tsara ny maotera sy fitaovana toy ny tandroka na jiro, famantarana mivily ary tsy maintsy mazava tsara ny fitaratra, frein na takela-by,…
Ahoana ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab? Ny fisavana ny kalitaon’ny fiara amin’ny alàlan’ny hoe ny tapakila dia ny karatra fisavana fiara sy ny pasipaoro amin’ny dingana fandraisana mpiasa sy fanofanana. Ireo izay misoratra anarana hitantana ny Grab dia tsy maintsy mameno ny fampahalalana rehetra voarakitra ao amin’ny taratasy ary tsy maintsy miantoka ny fahamarinany tanteraka.
3. Dingana 3: Mandehana any amin’ny biraon’ny Grab raha hisoratra anarana
Ahoana ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab? Rehefa avy nanomana ny antontan-taratasy fisoratana anarana Grab sy ny antontan-taratasy ilaina rehetra ianao dia tsy maintsy mandeha mivantana any amin’ny biraon’ny Grab akaiky indrindra vao afaka misoratra anarana. Soraty ny fitsipika rehetra mba hamitana ny fomba fiasa ary miandry ny mpiasan’ny Grab hanamarina sy manisy fitomboka izany, dia mandamina fotoana hanatrehanao fampianarana amin’ny alàlan’ny fampiharana Grab Driver. Ny lesona dia hatao ao anatin’ny adiny 2 ary rehefa vita ny fianaranao dia afaka manao fitsapana fanontaniana 20 eo ho eo ianao, ny fanontaniana 17/20 marina dia Pass.
READ Epoxy Resin là gì? Đặc điểm và Ứng dụng của keo Epoxy Resin | Anybook.vn
4. Dingana 4: Misoratra anarana amin’ny Momo ary mividy fanamiana Grab
Ahoana ny fisoratana anarana amin’ny fitantanana ny Grab? Rehefa avy nandalo ny dingana fanamarinana ianao dia mila misoratra anarana amin’ny momo ary mividy ny fanamian’ny Grab araka ny fitsipika. Misy fonosana combo maro azo isafidianana ho an’ny mpamily. Hahazo faktiora ianao avy eo ary ento any amin’ny toerana voatondro ahafahanao mandray ny fanamianao ary miandry ny kaontinao voasoratra anarana ho mavitrika (matetika aorian’ny 24 ora manomboka amin’ny daty fisoratana anarana dia afaka manokatra ny fangatahana ianao mba hahafahanao miditra amin’ny kaontinao). nahazo vahiny)
Hijery misimisy kokoa: Mpamily Grab an-jatony no mamono ny fampiharana alohan’ny hanapahan-kevitra hampiakatra saran-dalana
IV. Traikefa mitantana ny Grab Food miaraka amin’ny fidiram-bola ambony izay tsy fantatrao
1. Mazoto mihazakazaka mankany afovoany
Ity no olana lehibe indrindra ary olana lehibe indrindra rehefa mitantana GrabFood ianao na manatitra sakafo miaraka amin’ny serivisy rehetra. Tsy toy ny GrabBike, ny mpanjifa dia afaka mizara izany eny rehetra eny, fa ho an’ny sakafo dia any amin’ny faritra afovoany sy be mponina ny ankamaroan’ny trano fisakafoanana, ka raha toa ianao ka Raha mipetraka lavitra ianao dia mila mandray andraikitra amin’ny fampandehanana ny Grab mankany Mankanesa any amin’ireo foibe misy trano fisakafoanana maro toy ny: Distrika 1, Distrika 3 na Distrika 10, Binh Thanh … mazava ho azy fa tsy maintsy mahazo baiko bebe kokoa noho ny toerana ao an-tanàna. arabe.
2. Mihazakazaka ao anaty orana
Amin’izay fotoana izay ny orana na ny orana dia misy ny mpamily izay mamono ny app be dia be, fa amin’izao fotoana izao dia tsy afaka miaina ny baikon’ny livraison, mila mitandrina ianao. Ny olana eto dia amin’ny orana mazava ho azy fa ho sarotra kokoa ny fampandehanana ny Grab noho ny tara-masoandro, nefa hanana tombony ihany koa. Raha avy ny orana dia hihena ny fitohanan’ny fiara, betsaka ny commande amin’ny Grabfood, ka tokony hanomana akanjo orana tsara rehefa avy ny orana fa tsy hisy fiantraikany izany.
3. Tazony ambony sy ambany 10k ihany ny poketra
Ny tsiambaratelon’ny poketra mihoatra ny 10k dia vitsy ny olona manao izany ary mahatsikaritra fa traikefa Grabfood nozarain’i Huy Doan tao amin’ny Youtube mitantana ny Grab. Amin’ny ankapobeny, araka ny fantatrareo rehetra, raha mihoatra ny 10.000 VND ny poketrao dia tsy hanome fiara anao ny Grab, rehefa manana 9.999 VND ianao dia tsy hahazo fiara Grab izay tsy maintsy alainao. . Na izany aza, rehefa mitantana ny GrabFood dia matetika ianao no mamela vola mihoatra ny 100,000 VND na 200,000 VND ka ho avo be ny tahan’ny fandehanana lavitra.
4. flexibility renivohitra
Ny fahafahana manangana renivola dia afaka manampy anao hanomana ny tombotsoanao amin’ny ora faratampony, raha avelanao ho lehibe loatra ny renivola Grab anao amin’ny ora faratampony, dia mety ho kely kokoa ny baiko. , ny renivohitra Grabfood dia tokony ho 300.000 VND fotsiny
5. Aza manaiky sidina 10 minitra alohan’ny ora maika
Manaraka izany, misy zavatra tena manan-danja tsy maintsy takarinao dia ny bonus mihaza mba hampandehanana ny Grab amin’ny ora be indrindra. Eto, ny ora faratampony lehibe dia ny fe-potoana azo lazaina toy ny 11ora – 13h sy 18h – 20h isan’andro. Satria ao anatin’ireo fe-potoana ireo dia hahazo Grab plus ianao manomboka amin’ny 8,000 VND ka hatramin’ny 15,000 VND ho an’ny fitsangatsanganana GrabFood, ireo izay miasa ho an’ny valisoa dia azo antoka fa hahazo fiara 12 ka hatramin’ny 18 mandritra ny ora be indrindra raha ampiharina tanteraka.
Koa rehefa 15 minitra eo ho eo ny ora maimaika, ohatra amin’ny 10:45 na 17:45, dia tokony hiezaka hiandry hatramin’ny 11 ora maraina na amin’ny 6 ora hariva vao handray ilay fiara. Raha mahazo ny fakana aloha kokoa noho ny amin’ny fotoana faratampony ianao dia tsy maintsy manatitra sakafo mandritra ny ora be indrindra fa tsy hahazo ny bonus.
Jereo koa: Orinasa mpanatitra inona no tokony hofidian’ny mpitatitra hiasa?
Ity ambony ity dia lahatsoratra mizara traikefa ary koa ny haavon’ny fidiram-bolan’ny Grab, iray amin’ireo asa mahaliana indrindra ankehitriny. Manantena izahay fa amin’ny fampahalalana nozarainay tamin’ny mpamaky anay, dia misy fahalalana mahasoa maro.
Previous: Chi tiết công việc và những kỹ năng cần thiết – | Anybook.vn
Next: Cay đắng với những vần thơ chia tay ngắn, đau đớn thấu tim can | Anybook.vn